Tuuga Sweden ugu doqonsan oo lagu xukumay xabsi iyo musaafuris | Somaliska
Tuuga Sweden ugu doqonsan oo lagu xukumay xabsi iyo musaafuris
Waxaan filayaa in akhristayaasha Somaliska ay si fiican u xasuustaan ninkaan. Waa ninkii bartamaha bishii hore wadada tareenka uga tagay nin cabsan oo uu baartay. Ninkaan ayaa la soo qabtay bilowgii bishaan ka dib markii shacabka Sweden ay gacan ka gaysteen soo qabashadiisa, isagoo laga soo qabtay xaafada Akalla ee duleedka Stockholm.
Ninkaan oo ah 28 jir ka soo jeeda wadanka Tunisiya ayaa maxkamadi ku xukuntahay 18 bilood oo xabsi ah iyo in wadanka laga musaafuriyo marka uu xabsiga dhamaysto. Ninkii uu wadada tareenka uga tagay oo lagu magacaabo Johny oo hada lug laga jaray ka dib markii uu tareenka jiiray ayaa xaadir ku ahaa maxkamada.
Ninka tuuga ah oo la waydiiyay sababta uu u baartay ninkaan ayaa sheegay in uusan xaysan wax uu cunto ku cuno. Markii la waydiiyay sababta uusan ninka uga qaadin wadada tareenka ayuu sheegay in uu ka cabsaday in loo maleeyo in uu isagu ku tuuray wadada. Ninkaan ayaa sidoo kale lagu haystaa dhac kale oo u geystay xagaaga.
Sababta loogu xukumay ninkaan xabsiga iyo musaafurinta ayaa ah tuugada keliya. Sweden sharci daro kama ahan in qof wadada tareenka looga tago. Arintaas ayaa keentay in dad badani ay ku baaqaan in sharciga wax laga badalo.
Arinta uu sameeyay ninkaan oo foolxumo ahayd ayaa ka caraysiisay shacabka Sweden. Kaamirooyinka ku xiran isteeshinka tareenka ayaa muujiyay ninkaan oo ku gaaf wareegaya ninka cabsan oo markii dambe intuu kacay ku dhacay wadada tareenka. Ninkaan tuuga ah ayaa markii uu ninku wadada tareenka ku dhacay baaritaan ugu dhaqaaqay oo ka qaatay boorsada lacagta iyo moobeelka, isla markaana uga tagay ninkii wadada tareenka oo daqiiqado ka dib uu jiiray tareenka. Johny ayaa laga jiray lugta bidix dhaawac soo gaaray ka dib.
Caruurta oo daawada lacag la’aan looga dhigayo
mr aniga says:
October 23, 2012 at 14:08
waan kusalamay sxb jimcaale mar hadii aan danbi ahayn in dadka looga tago wado tareen maxaa ninka lagu haysaa waaba gardaree ma shilamda uu xaday uunbaa??
mohamed ali sadik says:
jimcaaloow haba cabsanaadee ninka ku dhacay tunelbanaha miyaan xaq eheen in labadbaadiyo marka hore ka dib hala baartee oo wixii jeebka ooga jiray halaka bexee, ninkan tuuga ah in 18bilood lagu xukumo xaq maahan ee ninkan wuxuu istaahilaa in lugtii dhibahaan laga jaray in looga aargudo oo asagane lugta bidix laga jaro, taas haddiii ay maxkamadda suubin leheed cid dambe oo wax baarata lama arki leheen sweden wey qaldantahay amaanka ha sugto ee gobolada qaarkood amaankooda ma sugna. baj hej do
somai boy says:
October 23, 2012 at 15:54
waa ku faraxsanahay go’aanka maxkamada, ninkan mahan ruux ibnu aadam ah oo naxariis leh, hadana tuugonimo ayuu ku darsaday, oo waxa uu magaca ka dilay ajaanibta dhan ee Sweden degan,
marka tuuganimadiisa hala tago meeshuu kayimid balaayo kugu dhacday dheh.
October 23, 2012 at 18:28
Anigu waxaan u arkaa denbiga ugu wayn ee ninkaasi galay inuu yahay inuu qof bani aadana tareenka uga tegay si uu ujiidho laakiin waxa layaaba haday arinta in tareenka qof looga tagaa Sweden caadi katahy sida uu jimcaale sheegay waa sharci bini aadan nimada kabaxsan umana malaynayo inay wadan wadamada aduunka kamida caadi katahay markaa jimcaale warkaas iska hubso.
October 23, 2012 at 20:49
waxan u arka sheeko raqisa maxay ayaku usamenwayen inay ka ilaliya tarenada mesha aymaran dadka camsan dad kailaliyo
waxaan idin waydiiyay asxaabta ninka mahaysan dhalasho miyaa, sidee maxkamadu ugu xukuntay mastaafuris, mise wuxuu haystay sharciga yar, takale qofka haysto dhalasho lagumaxukumeen ayaan filayaa mastafuris
October 28, 2012 at 15:05
asc waaba wax fiican kii danbi ka kala swedhan messhuu ka imaaday in loo celiyo tuugada waa yaraanaysaa kan in lagu quusto ayaa fiican
hada haysato dhalasho iyo hadii kalaba waa isku mid hada wadanka ka gasho danbi wayn waa lagu masafurinaa .
October 31, 2012 at 22:36
laakiin naxariis darana waaba xaqgudub wayn in qof dareen loo dhigo si u cunto u helo isag waxaba xaq aheed in dhowr sano la xukumo iyo waliba musafuris waaba qof aan naxeene .